Waa maxay sababta waa in aad safarka In Europe In Spring | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Waa maxay sababta waa in aad safarka In Europe In Spring
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo(Last Updated On: 06/11/2020)
Qof walba waxaa ku riyooneysa Spring for the cimilada diiran. Mar walba waa ay waqti qurux badan Yurub markii barafka ee xilliga qaboobaha waxay u banaynaysaa cusboonaysiinta dhalaalka guga. Jardiinooyinka iyo jardiinooyin ayaa nool magaalooyinkuna nolosha dib ayey u soo celiyaan. Safraya Europe guga, ka hor xagaaga gali, sidoo kale waa waqti fiican in bulk badnaa Yurub iyadoo kharashka hoos heerka garabka xilli saaxiibtinimo. Waxaan eegno qaar ka mid ah ugu sasabasho, xiiso leh, iyo meelo la yaab leh oo loogu safro Yurub Guga.
The wax ugu horeysay oo ay soo xusuusisa markay Socdaalka ee Europe guga:
Spring Miraha iyo Khudaarta In Suuqyada Yurub (Oo Makhaayadaha!)
Airfares waa jaban
hotels waa jaban
baabuur la kireysto waa u fududahay in ay reserve at qiimaha gorgortan.
Museum s aan la isugu
Tareenadu waa had iyo jeer ka jaban marka aad ka iibsan on Save A Tareen aad Tigidhada tareenka.
Iyo kan ugu dambeeya, laakiin ma yaraan, Yurub guriga waa. Ma jiraan wax dalxiisayaal urka jidadka iyo maqaayado ay jecel yihiin iyo hadda la gaaray waqtigii ay cuni karin iyo ciyaaro nabadda–waana jaban!
Ku raaxayso Cuntada halka Socdaalka ee Europe guga:
Waxaan qoraal ah articles dhowr ah oo ku saabsan cuntada. Waxaad iyaga ka akhrisan kartaa HALKAN iyo HALKAN. Sidaas darteed waa yaab ma laha in aan cuntada sida a highlight ee safarka ee Europe ee Spring!
Ka dib markii jiilaalka dheer ee khudradda xididka dubay, Romans sugaynaa in a puntarella cagaaran qadhaadh yeedhay, nooc ka mid ah chicory. Waa xilli-dambeedka xilliga qaboobaha oo ka soo baxa Lazio. Waa harbinger ah ee guga, labbisto yar oo saliid ah iyo kalluun la jarjarey. Delish!
Magaalada Turin si ay Tareenadu Rome
Foggia in Tareenadu Rome
Grosseto in Tareenadu Rome
Arezzo in Tareenadu Rome
In suuqyada guga Talyaani, waxaad ka heli doontaa khudaar badan oo la yaqaan iyo dad badan oo aan la aqoon. Waxaa weli ay noqon doontaa artichokes guga (ku mahadsan tahay wanaag), oo iyana waxay ahaan doonaan jaban, laakiin waxaa jiri doona dhowr cayn. Our jecel yahay artichokes spiny ee Sicily iyo Sardinia ah. Waxay waxaad fartaan Wannaagga woohow iska idaha; ficil geed kasta oo ku Sardinia ayaa jirad!
oddities kale waxaa ka mid aannu u jecel, agretti, cawskii ah in aad saute in yar oo saliid ah, iyo toontii qaar ka mid ah, xawaash khafiif ah haddii at dhan, sababtoo ah waxa ay leedahay dhadhan beesho a soo jireenka ah ee ay meesha dhalashada. Waxaa sidoo kale jira Cardoons (cardoni ee Talyaaniga, qaraabo ah oo artichoke ah) iyo buro basasha oo kale lampascione sawirka loo yaqaan ah, runtii nooc gaar ah guluubka yakintos in mar ahaa cucina povera, karinta masaakiinta, iyo hadda waxa uu noqday arrin rayn sida saxan dhinaca ee Puglia a raagayaan “saliidda” ama ka yar oo saliid.
The strawberries duurjoogta ah ee France waa waajib ah! xitaa arkitaan, waa strawberries ku koray Aveyron waxaa gaarka ah iyo bislaadaan badan hore strawberries beerta.
Spring sidoo kale waa bilowga iid labo bilood dhir ee Vale of Evesham in Worcestershire in Cotswolds ah. xilli dhir White ee Germany iyo waqooyiga Europe bilaabantaa May.
Haa, dadka ku nool Yurub tago oo dhan si dabaal dhir, white, cagaaran, ama duurjoogta ah sida loo wada baxo.
Greece ayaa inta badan isku ruuxa ee ururinta iyo qaar badan oo ka mid ah khudaarta guga la mid ah sida Italy.
Hadda, ku filan oo ku saabsan cuntada. Badan oo ku saabsan safarka dhabta ah!
Waxaan qabaa inaan dhan ku heshiin karin in ay jiraan marnaba waqti xun si ay u tagaan Paris. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira wax gaar ah magaaladan reer hindiga ku saabsan iyo farxaan gastronomic kaalay wakhtiga gu'ga. Taas oo xaqiiqo ah oo qiimihiisu Socdaalka ee Europe guga!
The soo jiidashada of Paris guga waa uun turjimaysa. From picnicking hore ee Tower Eiffel si Baadi beero badan oo cajiib ah ee magaalada, warwareeggayga tegayaa by bangiyada of waxba reebin ah, Aroor qoraxdu ka badan u dhaawqacantahay lakiin cusub iyo latte, eves sahashan badan Pernod oo khamri ah cas - hareereysan ubaxu geedihii Asheeraah Chestnut, ubaxu beero, iyo maalmaha guga buluug dhab ah breathtaking.
Qaybta ugu wanaagsan waa khadadka. Ama la'aanta iyaga ka mid ah, waa in aynu nidhaahno. The Louvre iyo Tower Eiffel ma yihiin ku dhowaad sida qaro weyn sida Xagaaga.
oo lagu daray A weyn ee guga ee Paris waa des Nuit ah Musee ama Night of Matxafka. It’s when museums, tahay galleries, iyo xarumaha dhaqan magaalada oo dhan albaabbadooduna waxay u furo, hal habeen May si visitors la kulmi karaan qaar ka mid ah farshaxanka fiican adduunka ee hab aad u kala duwan: gebi ahaanba bilaash ah oo aad waqti dambe habeenkii.
Safraya Europe guga – Yurubta Bari – Hungary:
Marka cirro iska dhaco ishii, caasimada Hungarian si dhab ah u imanayaa inuu nolosha. Waxaan ku talinaynaa muujiyo goobta xisbiga ee Budapest iman Spring. Waxaa jira ciidan dhan xafladaha dhaqanka iyo bandhigyo inay ka qayb galaan. Visitors dhabta kartaa ilaa Pálinka sanadlaha ah Dabaaldag, soo bandhigtay tastings ka badan 300 nooc oo khamri, halka Festival Spring ah, labo toddobaad cajiib ah, barbaro tacsida ee ay isuga ee orchestral, jazz iyo dunida qaab music.
Halkan liiska weyn waxyaalaha la samayn karo ee Spring ee Budapest:
Raaco Eye Budapest ee Arag ubaxeed cherry ee Botanical ELTE Jannada
Cun baxay at beero cunto-gaari
Ku raaxayso Breezy BKK geeyo doon ah Ku raaxayso maalin cir weyn ee ciidaha cuntada
Dhuumaalaysiga galay dhismayaasha taariikhiga ah inta lagu guda jiro Budapest100 Raadi farsamada gacanta maxaliga ah ee Budapest Spring Fair Hel raashinka suuqyada Sunday in baararka baabba '
Laylan ee rubberized kuwan raadkaygay orodka ee magaalada
Qaado chairlift ee sare duulaya geeyo
Booqo bandhigyo kalifaya SIP farsamada degaanka qamri at tagi Terrace
Qaybta hawada kulul ee Socdaalka ee Europe guga – Seville, Spain:
Caasimadda ah ee xiiso leh Andaluusiya ka qaraxdo nolosha guga: meheradaha iyo makhaayadaha halhays tamarta. ubaxeed Orange iyo liinta cad ka baxo ubaxyada, iyo jadwalka dhaqanka furmay galay geer cusub.
Haddii aad dareensan tahay faraxsanahay Spring iyo doonayaa inaan u dabaal, ka dibna aad tahay meel sax ah. Expect weeks, of cawee, cayaar, iyo bandhig faneedyo jidadka cobblestoned. Fall jacayl la flamenco, iyo aad u hesho wax aad ka dheregtaan of rakaab Andalusian cajiib ah.
Waayo, haddii ay dhacdo qabow in ay la kulmaan marka ay safarka ee Europe guga, jiheysan Seville inta ay caan Feria de Abril, ama cadaalad ah guga. The Seville Fair dhaqan bilaabo laba todobaad ka dib cad todobaadkii Easter, degaanka weyn ee daawooyinka (map), in koonfur-galbeed ee magaalada, soo socda si webiga. Tani waa toddobaadkii of cayaar halis ah, cabbaya, cunidda, iyo is dhexgalka bulshada, iyadoo habeen xilli dambe – ama dhamaan-nighters – caadi ah. Cabbirka sheer of Fair April ee lanooga waa caadi ahayn. Laga bilaabo qiyaastii hadhkii ilaa fiidkii hore – gaar ahaan on Tuesday, Maalintii ugu horraysay si rasmi ah – Sevilla maraan bulshada agagaarka fairground ee gaadhifardood ah ama saaran gaadiid. Waxaa sidoo kale jira maalin kasta bullfights, guud ahaan loo arkaa ugu fiican xilli.
Munich waa la yaab leh sanadka oo dhan, laakiin highlight dhab ah waxaa qaadaan magaalada inta lagu guda jiro ay sannadlaha ah Fruhlingsfestival, ama xafladda guga, April kasta / May. Ka fikir Oktoberfest, laakiin dadka jidka yar, laakiin biirka kaliya sida ugu badan 😉
Safarka ugu danbeysay ee Europe guga – Dublin, Ireland
The jidadka Dublin qarxaan si ay nolosha bishan for Ixtifaalka of St. Maalinta Patrick ee. Socotada booqanaya magaalada bishii March doonaan wax badan in ay qabsadaan ay fiiro. Fiiri ee socodka socodka ee Dublin Port, ama caanka ah laba-mile-dheer St. Patrick ayaa Festival Parade. dabaal The billawdaan dhan isbuucii, si loo qorsheeyo on baxsan badnaa ee K Club The, dubaan dalka 5-star ah oo ku yaalla 30 daqiiqo ka baxsan Dublin. Iyadoo a guridda 1936 baabuurka guriga Jaguar, tastings khamrada curated, iyo faras danbeeyaan on 550 acres. na Saxiix!
Spring inay jaanta iyo buug ay ku tababaraan tigidh leh Save A tareenka si ay u booqdaan mid ka mid ah, kuwaas oo goobo tareen, in daqiiqo!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit ah la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/traveling-europe-spring/ - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / es si / de ama / iyo luuqado badan.
#EuroprinSpring #FoodinSpring europetravel longtrainjourneys Spring tareen safarka traveltips